Featured Blog Posts – June 2014 Archive (14)
समाजले द्वन्द्वलाई कुनै आकार दिन्छ भने द्वन्द्वले समाजलाई विकासतर्फ लैजान्छ भन्ने अवधारणा संसारभरी मानिआएको विषय हो । व्यक्ति, समूदाय, सभ्यता, संस्कृति र जातिको समग्र रुप जसलाई समाज भनिन्छ । यिनै तत्वहरुबीचको मौलिक स्वभाव, व्यक्तिगत दृष्टिकोण र आर्दश एक अर्काबीच अनुकुल र प्रतिकुल हुँदै जाँदा द्वन्द्वले एउटा रुप लिन्छ । त्यसरी उत्पन्न हुने अवस्थालाई हामीले सामाजिक द्वन्द्व मान्ने गर्दछौं ।
कतिपय अवस्थामा यसलाई सामान्य रुपमा पनि लिन सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वको स्वरुप निकै भयावह…
Added by Basant Sharma on June 22, 2014 at 1:00pm — No Comments
एकाबिहानै मोबाइलमा धुरधुरधुरधुर गर्दै फोन आयो । मोबाइल भाइब्रेसनमा राखिएको थियो । रिङ्टोन या आलाराम अलि ठम्याउन गाह्रो भयो । नजिकै गएर हेर्दा चिरपरिचित नम्वर रहेछ तर सुरक्षित नगरिएको । उसले हतासमा हेलो भन्दै गर्दा मैले ल भन भन किन एकाविहानै हो भनेर ठट्टाको शैलीमै कुरा अगाडि बढाए । जब उसको रुन्चे स्वरमा छोरीलाई हिजोबाट स्कूल छुटाएको विषय अगाडि बढ्यो म अलमल्लिए“ । यस्ता पनि ‘आमा’ मुखबाट फुत्किहाल्यो । उसले घटनाको विस्तृत विवरण सुनाउ“दा मलाई झसङ्ग लाग्यो । किनकि घटना हालको ‘टेक्नोलोजी’ले…
Added by ruchi luintel on June 17, 2014 at 1:30pm — 1 Comment
“सिस्टर घरमा श्रीमती र अढाई बर्षीया छोरी छिन । के गर्दै होलान् ? मेरो यस्तो हालत थाहा पायो भने मुर्छा पर्छन्, सिस्टर मुर्छा ।” लर्वरिएको आवाजमा विप्लप बोल्यो । विप्लपको आर्तनादलाई सान्तवाना दिदै भने ‘हरेक मान्छे आफन्तको ब्याग्र पर्खाइमा हुन्छन् । उनिहरुको आशालाई निराशामा बदल्नु हुन्न । त्यसैले हामी घोपा जादैँछौ त्यहाँ उपचार गराएर घर फर्किनु पर्छ ।” मेरो भनाईले विप्लपको अनुहारमा अलि कति आशाको ज्योति देखियो । माईखोला पारी बाह्र गोलाई । ड्राइभरले द्रु्तगतिमा एम्बुलेन्स हाकीरहेको थियो ।…
Added by sandip jhajhalko on June 13, 2014 at 7:07pm — No Comments
कैलालीमा जिल्ला युवा सञ्जालको बैठक तथा सरसफाई सम्पन
जेठ २९ गते विहिबार कैलालीको टिकापुरमा जिल्ला युवा सञ्जाल कैलालीको बैठक तथा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सञ्जालका अध्यक्ष बिकास अधिकारीको अध्यक्ष्यतामा कार्यक्रम सम्पन भएको हो । साझेदारी विकास परियोजना युवा अभियानद्धारा गठित सञ्जालमा एघार गा.वि.स बाट १७ जनाको समिति गठन भएको युवा अभियान नेपालका कैलाली जिल्ला संयोजक ठाकुर प्रसाद करिया प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ । …
Added by netra parsad jaishi on June 13, 2014 at 4:00pm — 1 Comment
सहजकर्ता भएपछि ममा आएको परिवर्तन
नमस्कार । मेरो नाम अर्जुन चौधरी हो । म सिर्जना रेडियो श्रोता क्लवको सहजकर्ता हुँ । हामीले रेडियो कार्यक्रम नयाँ नेपाल, साझेदारी र साथीसँग मनका कुरा सुन्नका लागि रेडियो श्रोता क्लव गठन गरेका हौ । हाम्रो श्रोता क्लवमा २५ जना सदस्य छौ । त्यसमध्ये १५ जना महिला हुनुहुन्छ । हामी महिनामा दुईपटक रेडियो कार्यक्रम सुन्छौ । रेडियो कार्यक्रम सुनेर प्रसारण भएका बिषयमा छलफल गर्छौ । नबुझेका कुराहरु प्रतिकृयामार्फत इक्वल एक्सेसलाई सोध्छौ ।
सहजकर्ता भएपछि मैले सहजीकरण सीप सम्बन्धि पाँचदिनको तालिम…
Added by arjun kumar chaudhary on June 13, 2014 at 4:00pm —4Comments
महिला हिंसाको अर्को रुप छाउपडी प्रथा
छाउ हुनु महिलाको प्राकृतिक नियम हो । यो किशोर अवस्थामा प्रवेश भएपछि प्रारम्भ हुने महिलाको नियमित प्रकृया हो । तर कुरा अचम्मको छ समग्र सुदुरपश्चिमको, त्यसमा पनि अछाम जिल्लाको झनै अचम्मको छ । महिला छाउ भएपछि त्यसको छुई हुने अथवा महीनावारी भएका महिलाको नजिक आएपछि गोरु बाख्रा गाई पनि मर्छन रे, मानिसलाई पनि देउता लाग्छ रे ,घरमा बसेपछि आगलागी बाघ-लागी हुन्छ रे ! सुन्दै मानिस तिनछक्क पर्ने कुरा जस्तो लाग्छ । यो कुरा सुनेर मलाई मात्र हैन म जस्ता धेरै युवाहरुको मनमा किन भन्ने प्रश्न खेलीरहेको छ…
Added by indrasara khadka on June 12, 2014 at 6:30pm — No Comments
यसरी सम्भव भयो–‘गाउँको विकास’
एकाविहानै फरुवा, गैती अनि सब्बल लिएर यूवाको समुहनै जम्मा भयो । अनि सुरु भयो गाउँको कुलोमा होमपाईप हाल्ने काम ।यस अघिको होमपाईप सानो भएपछी एम्वुलेन्स, ट्रेक्टर अनि अन्य सवारी साधन गाउँ भित्र लैजान समस्या पर्यो । गाविसले त्यही स्थानमा होमपाईप हाल्न १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । १५ हजारले काम सम्पन्न गर्न नसकिएने भएपछी यूवाहरुनै जनश्रमदानमा जुटे । यो काममा यूवा एक्लै सहभागी भएनन् । गाउँका अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि सहभागी भएर संग संगै गाउँको विकासमा जुटे ।
गाविसमा विकास निर्माणकालागी बजेट…
Added by dashrath ghimire on June 12, 2014 at 4:00pm — 1 Comment
बिगतको त्यो दिन मेरो लागि आज पनि उस्तै छ । जब म त्यो दिनलाई सम्झन्छु तब मनमा कताकता डर लागेर आउँछ अनी अनायासै आँखाहरु रसाउन थाल्छन् । आज फेरि मलाई त्यो दिनको याद आयो ।लमजुङ जिल्लाको पुर्वी क्षेत्रमा मेरो गाउँ पर्छ । त्यही गाउँको मुलबाटो नजिकै मेरो घर । मेरो परिवार मेरा बुबा, आमा, भाइ अनि म गरी ४ जना थियौं । हाम्रो परिवार सानो थियो । अनि बुबा आमाले दिनभरी मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले मेरो घरको चुलो बल्ने गर्थ्यो । त्यसैमा हामी खुशी थियौं ।…
Added by puza Pariyar on June 9, 2014 at 11:30am —3Comments
मुस्ताङमा शान्ति र मेलमिलाप निम्ती भईरहेका प्रयासहरु
अन्य जिल्लाको तुलनामा मुस्ताङ जिल्ला विगतको द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष रुपमा कम प्रभावित भएता पनि अप्रत्यक्ष रुपमा समाजका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रहरुमा भने असर परेको छ । समाजमा हुन सक्ने द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय शान्ति समिति मुस्ताङले गरीब, निमुखा, महिला, बालबालिका र दलितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
समितिले शान्ति स्थापना गर्नका लागि विद्यालयबाट नै शुरु गर्ने भन्ने उदेश्यले विद्यालयमा विद्यार्थीहरु बीच शान्ति सम्बन्धी चित्रकला, निबन्ध, वक्तृत्वकला…
Added by jamuna on June 3, 2014 at 11:30am —2Comments
'एकैछिन पुरुष बन्दा'
आधुनिक जमानामा पुरुषहरुलाई हरेक क्षेत्रमा अप्ठ्याराहरु छन् । पढ् । पास फेलको कुनै निश्चितता छैन । उमेर पुग्यो छोराले जागिर खाएन भन्ने अभिभावकलाई चिन्ता । अर्कोतिर विवाहको उपर्युक्त उमेर भयो फेरि विवाहको झन्झट । ल, प्रेम गरेर विवाह गरे त बुझ्ने खालकी महिला साथी पर्लिन् ।
यदि अर्कोबाटो भनेको मागी विवाहको हो । मागी विवाहको लागि केटी हेर्न गयो ।बाबु जागिर के छ ? पहिलो प्रश्न सोझिइहल्छ । पढाई कहाँ पुग्यो ? चुरोट, रक्सी त्यस्तो केही छ, छैन पहिले नै पृष्ठभूमिको तयारी भइसकेको हुन्छ । फेरि…
Added by ruchi luintel on June 3, 2014 at 11:00am —2Comments
त्यो अत्यासलाग्दो साँझ
मेरो बाबा इन्डियन आर्मी हुनुहन्थ्यो र बाबा जागिर सकेर घरमा फर्किसक्नु भएको थियो । २०६० पौष १५ गतेको दिनको घटना हो । मेरो बाबा घरमा बसिरहनु भएको थियो । त्यसैबेला बिद्रोही पक्षका तीन जना मान्छेहरु आई 'तिमो बाबा खोई' भनेर सोधे । मलाई के थाहा उनीहरुले के गर्छन् भनेर ! त्यसैले मैले पनि 'बाबा भित्र हनुहन्छ' भनिदिएँ । त्यसपछि उनीहरुले बाबालाई कतै लैजाने कुरा गरे । अनि मेरो मुमाले 'उहाँलाई कहाँ लान लागेको हो? के कुरा हो, यहीँ भने हदैन?' भन्दै उहाँ पनि बाबासंगै जान लाग्नुभयो तर उनीहरुले मेरो मुमालाई…
Added by Nilam Thakuri on June 3, 2014 at 10:00am —3Comments
युद्धका घाउ र नागरिक स्वतन्त्रता
घटना २०६०/०६१ सालतिरको हो । जुन बेला म कक्षा ७ मा पढ्थें । नेपालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध चलेको थियो । माओवादीको आन्दोलन दबाउन सरकारको तर्फबाट पनि कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन । जसका कारण के गाउँ, के सहर जताततै सरकार र माओवादी पक्षको भिडन्तका घटना सुनिन्थ्यो । माओवादीले पनि आफ्नो युद्धलाई जारी राख्दै स्कुल स्तरका स–साना केटाकेटीहरुलाई लैजाने गर्दथ्यो । जसबाट हामीहरुलाई त्रास हुन्थ्यो । आफूभन्दा माथिल्लो स्तरका दाजुदिदीहरुलाई आँखै अगाडि माओवादीले एकाएक जबर्जस्ती लैजाँदा…
Added by Mamata Acharya on June 3, 2014 at 9:30am —2Comments
द्वन्द्वकालीन ति दिनहरु
सदरमुकाम बाग्लुङदेखी अर्जेवा गाविस करिब १४ कोस टाढा पर्छ । हामी त्यहाँ नै बस्थ्यौँ । गाउँमा आम्दानीको श्रोत नहुँदा र रोजगारीको पनि प्रशस्त अवसर नभएकाले मेरो बाबाआमा गाउँ छाडेर पर्वतको फलेवासमा बस्नुहुन्थ्यो । जहाँ हाम्रो जीवन धान्ने सिलाई पसल थियो । हामी तिन बहिनी गाउँमा नै बस्थ्यौँ ।
शानिबारको विदा पारेर हामी हप्ताभरिलाई खाना पुग्ने कुराहरु लिन र बाबाआमालाई भेट्न जान्थ्यौँ । यसरी नै हाम्रा दिनहरु वितिरहेका थिए । सदाझैँ शानिबारको दिनपारी म हतारहतार फलेवास गएँ । बाबाआमासंग रमाईलो…
Added by kamala pariyar on June 3, 2014 at 9:30am — 1 Comment
पिठ्युमा दुधेबालक हातले धकेलिरहेको ठेला, उखरमाउलो घाम, लगभग ३० मुन्तिरको महिला सडकमा पसिना सिञ्चित गर्दैछ । झट्ट हेर्दा यो गरिबी भनेर धिक्कार्न मन लाग्छ । तर, वास्तविकता अर्कै छ रेखाको । उनी देशमा शान्ति स्थापना भएको देख्न चाहन्छिन् र त सेना समायोजनमा कुनै बखेडा नझिकी स्वच्छिक अवकाशमा घर फर्किन् । अन्तरजातीय विवाहले स्थान नपाएपछि बालकको बाबु खै कता कुनै अपरिचित जस्तो लाग्छ उनलाई त्यो चित्र । आज भुत बनेर जिस्काए जस्तो, डस्नै लागेजस्तो ।
‘पिरो अमिलो ठिक्क गर्नु है’ अर्को अर्डर…
Added by ruchi luintel on June 2, 2014 at 6:00pm —3Comments